How to use D-Link Modem in Ubuntu 16.04 LTS version? Please explain me. — MYSTERY ZILLION
How to use D-Link Modem in Ubuntu 16.04 LTS version? Please explain me.
April 2017 in Ubuntu
Ubuntu 16.04 မှာ D-Link Modem သုံးလို့ရသလား.. ဘယ်လို install လုပ်ရသလဲ ... ဖိုင်ထဲမှာတော့ DTLW4_D305A_linux_8.0.1ww_160628.tar.gz ပါတယ်... ကျေးဇူးပြုပြီး ရှင်းပြပေးပါလားဗျာ...
April 2017 Administrators
DTLW4_D305A_linux_8.0.1ww_160628.tar.gz ကို ဖြည်ချကြည့်ပါ။ .tar.gz ဆိုတာက zip file လိုမျိုး compress လုပ်ထားတာပါ။
ဖြည်ချပြီးမှ အထဲမှာ ဘာပါသလဲပေါ်မှာ မူတည်ပြီး ဘယ်လို သွင်းရမလဲ ဆိုတာကို ပြောနိုင်ပါမယ်။
ဖိုင်ထဲမှာတော့ install.sh, uninstall.sh, linux file တွေပါတယ် ... linux file ထဲမှာ etc, lib,usr file တွေပါတယ်... ဘယ်လိုဆက်လုပ်ရမလဲ... Dlink & Prolink ဘယ်ဟာက ပိုကောင်းမလဲ... အဲဒါတွေရော Ubuntu မှာ သုံးလို့ရသလား
အစ်ကို command line နဲ့ မသွားတတ်ရင် extract လုပ်ပြီးသား file ကို right click နှိပ်ပြီး open in terminal နဲ့ဖွင့်လိုက်ပါ။
install လုပ်မယ့် command က ရေးထားတဲ့ language ပြောင်းလဲမှုရှိမယ်ထင်ပါတယ်။